Maqaalka Jessica Hawthorne-Castro ee Martech Zone |
Maqaallada by Jessica Hawthorne-Castro
Talaado, Nofeembar 7, 2017 Jessica Hawthorne-Castro
Ma jiraan wax su'aal ah oo ku saabsan, tafaariiqda waxaa ku socda isbeddel firfircoon. Is-beddelka joogtada ah ee dhammaan kanaallada ayaa ku qasbaya tafaariiqleyda inay xoojiyaan iibkooda iyo istiraatiijiyaddooda suuqgeynta, gaar ahaan markay ku soo dhowaadaan Black Friday iyo Cyber ​​Monday. Iibinta dhijitaalka ah, oo ay ku jiraan khadka tooska ah iyo mobilada, ayaa si cad u ah meelaha ugu caansan tafaariiqda. Cyber ​​Monday 2016 waxay sheegatay cinwaanka maalinta ugu weyn ee iibka khadka tooska ah ee taariikhda Mareykanka, iyadoo $ 3.39 bilyan lagu iibiyay khadka tooska ah. Jimco Madoow ayaa timid
Ku soo jiidashada macaamiisha cusub iyada oo la hagaajinayo sawirka guud ee astaanta ayaa caqabad joogto ah ku ah suuqleyda. Iyada oo leh muuqaal jajab ah oo warbaahin ah iyo carqaladeynta baaritaanka badan, way adagtahay in lala qabsado rabitaanka macaamiisha farriinta la beegsanayo. Suuqleyda ay la soo gudboonaatay caqabadan ayaa badiyaa u jeesata “derbiga ku tuura si ay u arkaan haddii ay ku dhegan tahay” iyo in kale, halkii ay ka ahaan lahayd istiraatiijiyad aad loo sii qorsheeyay. Qeyb ka mid ah istiraatiijiyaddan waa inay weli ku jirtaa ololeyaasha xayeysiinta TV-ga,